What is Marketing? – Learning Myanmar
by Inz Lee
Marketing ဘာသာရပျသညျ စြေးရောငျးရမညျ့ စြေးကှကျတှငျ ဖွဈပျေါနမှေုအားလုံး ( စြေးကှကျလိုအပျခကျြ ၊ စြေးကှကျကိုထိုးဖောကျ၍ဝယျသူကိုဆှဲဆောငျခွငျး ၊ စြေးကှကျအတှငျးနာမညျတဈခုရအောငျပွုလုပျခွငျး ၊ စြေးကှကျတှငျးရှိဝယျသူစိတျကနြေပျရအောငျပွုလုပျခွငျး အစရှိသညျဖွငျ့ …..) ကို နညျးဗြူဟာကကြ စီမံခနျ့ခှဲပွီး လိုခငျြသောပနျးတိုငျသို့ အရောကျသှားခွငျးပငျဖွဈပါသညျ။
စြေးကှကျလလေ့ာခွငျးဖွဈသညျ့ marketing ဘာသာရပျဟာဖွငျ့ လလေ့ာလို့မဆုံးအောငျ ကယျြပွနျ့လှပါသညျ။
ထိုဘာသာရပျရှိ အယူအဆအခြို့မှာ လလေ့ာသငျယူစရာမလိုဘဲကို လကျတှေ့ ဝယျယူဖောကျကားနသေောစြေးထဲတှငျကငျြ့သုံးနကွေသညျကိုထောကျပွလိုပါသညျ။
ကနဦးအနနှေငျ့ marketing ဘာသာရပျအခွခေံအုတျမွဈဖွဈသော4p နဲ့စကွညျ့ကွပါစို့
အရပျထဲမှာကော4p ကိုတကယျအသုံးခနြရေဲ့လား ?
မိမိပွုလုပျထားသော မုနျ့ အသဈအဆနျးမြားအား စြေးကှကျတှငျးဖွနျ့ဝရေောငျးခခြွငျးအစမျးသုံး/ အမွညျးပေးခွငျးကို စီးပှားရေးပညာရပျရှိ marketing ဘာသာရပျတှငျ promotion ချေါပါသညျ။
ထို promotion ဟူသောအရေးကွီးသညျ့စကားလုံးအဓိပ်ပါယျကိုပငျသခြောမသိဘဲစြေးထဲတှငျ မုနျ့အသဈအဆနျးတခု လုပျကွညျ့ပွီးစမျးသပျကြှေးမှေးရာမှ အောငျမွငျသှားသော မုနျ့အသဈအဆနျးတှရှေိနဆေဲပါ။
မိမိတငျသှငျးမညျ့ ပစ်စညျး၏ အရညျအသှေးပျေါအာမခံခကျြသညျ စီးပှားရေး ဘာသာရပျရှိ marketing ဘာသာရပျတှငျ product ဟုချေါပါသညျ၏
ထိုproduct ဟူသောစကားလုံးကို အသခြောလလေ့ာဖူးဖို့ရာခိုငျနှုနျးနဲသော မီးပှိုငျ့ကူးခှရေောငျးသူ ၏ ” မိမိထံဝယျယူသှားသော ကူးခှမှော အိမျမှာစိတျကွိုကျကွညျ့ပါ မကွညျဖူးဟုယူဆပါက ဒီလှညျးတနျးမီးပှိုငျ့မှာ ကနြော့ကိုပွနျလာရှာပါ ခငျဗြ” ဟူသော အျောသံက လကျတှရေ့ရှိသောအသိပညာဖွငျ့စာတှေ့ မညျသို့မညျပုံဆကျစပျနမေညျကိုမွငျနရေပါသညျ။
Marketing ဘာသာရပျတှငျ အရေးကွီးသော price ဟူသော p တှငျပါဝငျနသေော ငှကွေေးသတျမှတျခကျြ / ပေးခမြှေုနဲ့ဆကျစပျသော ” လမျးထိပျကအနျတီကွီးဆိုငျမှာအင်ျကြီထမီးဝမျးဆကျတှကေို လပေးနဲ့ပေးမှာနျော ” ဟူသော ရပျကှကျထဲက ဆိုငျရှငျအနျတီကွီး၏ စြေးကှကျနားလညျမှုကိုအောခရြပါလိမျ့မညျ။
Marketing ရဲ့4p ရဲ့နောကျဆုံး place ကိုရော အသုံးခနြပေီလို့ယူဆပါလား ?
မွနျမာပွညျရှိလမျးအခွအေနကေိုအမှနျပငျ နားလညျ သိရှိနသေော Myanmar marketer တှကေဘသူလို့ထငျပါသလဲ ?
မီးပှိုငျ့တှငျ ရောငျးနသေောရသေနျ့ရောငျးသူ ဂြာနယျရောငျသူမြားလို့ဆိုလြှငျ ငွငျးနိုငျမယျမထငျပါဖူး။
လကျတှကေ့ကြလြုပျနတေဲ့သူတှေ ဘသူတှမြေားရှိလဲတှေးနသေူတှအေတှကျ ဆကျစပျတှေးချေါနိုငျမှုတိုးတကျလာမညျဟုယုံကွညျမိပါတယျ။
Marketing ဘာသာရပ်သည် ဈေးရောင်းရမည့် ဈေးကွက်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေမှုအားလုံး ( ဈေးကွက်လိုအပ်ချက် ၊ ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်၍ဝယ်သူကိုဆွဲဆောင်ခြင်း ၊ ဈေးကွက်အတွင်းနာမည်တစ်ခုရအောင်ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ဈေးကွက်တွင်းရှိဝယ်သူစိတ်ကျေနပ်ရအောင်ပြုလုပ်ခြင်း အစရှိသည်ဖြင့် …..) ကို နည်းဗျူဟာကျကျ စီမံခန့်ခွဲပြီး လိုချင်သောပန်းတိုင်သို့ အရောက်သွားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဈေးကွက်လေ့လာခြင်းဖြစ်သည့် marketing ဘာသာရပ်ဟာဖြင့် လေ့လာလို့မဆုံးအောင် ကျယ်ပြန့်လှပါသည်။
ထိုဘာသာရပ်ရှိ အယူအဆအချို့မှာ လေ့လာသင်ယူစရာမလိုဘဲကို လက်တွေ့ ဝယ်ယူဖောက်ကားနေသောဈေးထဲတွင်ကျင့်သုံးနေကြသည်ကိုထောက်ပြလိုပါသည်။
ကနဦးအနေနှင့် marketing ဘာသာရပ်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သော4p နဲ့စကြည့်ကြပါစို့
အရပ်ထဲမှာကော4p ကိုတကယ်အသုံးချနေရဲ့လား ?
မိမိပြုလုပ်ထားသော မုန့် အသစ်အဆန်းများအား ဈေးကွက်တွင်းဖြန့်ဝေရောင်းချခြင်းအစမ်းသုံး/ အမြည်းပေးခြင်းကို စီးပွားရေးပညာရပ်ရှိ marketing ဘာသာရပ်တွင် promotion ခေါ်ပါသည်။
ထို promotion ဟူသောအရေးကြီးသည့်စကားလုံးအဓိပ္ပါယ်ကိုပင်သေချာမသိဘဲဈေးထဲတွင် မုန့်အသစ်အဆန်းတခု လုပ်ကြည့်ပြီးစမ်းသပ်ကျွေးမွေးရာမှ အောင်မြင်သွားသော မုန့်အသစ်အဆန်းတွေရှိနေဆဲပါ။
မိမိတင်သွင်းမည့် ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးပေါ်အာမခံချက်သည် စီးပွားရေး ဘာသာရပ်ရှိ marketing ဘာသာရပ်တွင် product ဟုခေါ်ပါသည်၏
ထိုproduct ဟူသောစကားလုံးကို အသေချာလေ့လာဖူးဖို့ရာခိုင်နှုန်းနဲသော မီးပွိုင့်ကူးခွေရောင်းသူ ၏ ” မိမိထံဝယ်ယူသွားသော ကူးခွေမှာ အိမ်မှာစိတ်ကြိုက်ကြည့်ပါ မကြည်ဖူးဟုယူဆပါက ဒီလှည်းတန်းမီးပွိုင့်မှာ ကျနော့ကိုပြန်လာရှာပါ ခင်ဗျ” ဟူသော အော်သံက လက်တွေ့ရရှိသောအသိပညာဖြင့်စာတွေ့ မည်သို့မည်ပုံဆက်စပ်နေမည်ကိုမြင်နေရပါသည်။
Marketing ဘာသာရပ်တွင် အရေးကြီးသော price ဟူသော p တွင်ပါဝင်နေသော ငွေကြေးသတ်မှတ်ချက် / ပေးချေမှုနဲ့ဆက်စပ်သော ” လမ်းထိပ်ကအန်တီကြီးဆိုင်မှာအင်္ကျီထမီးဝမ်းဆက်တွေကို လပေးနဲ့ပေးမှာနော် ” ဟူသော ရပ်ကွက်ထဲက ဆိုင်ရှင်အန်တီကြီး၏ ဈေးကွက်နားလည်မှုကိုအောချရပါလိမ့်မည်။
Marketing ရဲ့4p ရဲ့နောက်ဆုံး place ကိုရော အသုံးချနေပီလို့ယူဆပါလား ?
မြန်မာပြည်ရှိလမ်းအခြေအနေကိုအမှန်ပင် နားလည် သိရှိနေသော Myanmar marketer တွေကဘသူလို့ထင်ပါသလဲ ?
မီးပွိုင့်တွင် ရောင်းနေသောရေသန့်ရောင်းသူ ဂျာနယ်ရောင်သူများလို့ဆိုလျှင် ငြင်းနိုင်မယ်မထင်ပါဖူး။
လက်တွေ့ကျကျလုပ်နေတဲ့သူတွေ ဘသူတွေများရှိလဲတွေးနေသူတွေအတွက် ဆက်စပ်တွေးခေါ်နိုင်မှုတိုးတက်လာမည်ဟုယုံကြည်မိပါတယ်။
AffiliateLabz February 15, 2020 at 8:16 pm
No. 735 (B), Muditar Housing, Mayangone Township, Yangon
© 2021 Learning Myanmar. All rights reserved.